TAMAANDHIGA "SHARAF MADOW" SIFOOYINKA IYO SIFOOYINKA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
"Amiir madow" ugu horreyntii loo yaqaan midabka burgundy madow ee midhihiisa. Inta soo hartay waa noocyada kala duwan ee yaanyo badan oo waaweyn oo jajab ah.
"Black Prince" ayaa laga saaray shinni laga keenay Shiinaha. Macmiilaha genetic waxaa loo adeegsaday beerashadooda, laakiin noocyada kala duwan looma tixgeliyo GMO, sidaa daraadeed jecel cunnooyinka caafimaad leh waxay isticmaali karaan noocyada kala duwan ee yaanyada aan cabsi lahayn.
Maqaalka waxaad ku baran doontaa waxa "Yariistada Black" yaanyahay, sifooyinka iyo sharaxaadda, iyo sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee kordhaya noocaan kala duwan.
"Prince Black": sharaxaad iyo astaamo kala duwan
Inkasta oo aanay jirin kala duwanaansho aasaasi ah oo ku saabsan beerashada iyo daryeelka, yaanyo bambo ah ayaa weli ka duwana shaqaalaheeda, oo ay raacdo sharaxaad kooban.
"Amiir madow" waxa loola jeedaa xoollada aan caddayn, taas oo ah, ma jiraan xayiraad kororka dhirirka. Sida noocyada kala duwan ee badan oo jalaatada ah ee yaanyada, waxay u baahan tahay garaf.
Inflorescences waxaa la sameeyaa 7-9 goor. Hal foosto ayaa qaabeeya ilaa 4-5 yaanyo. Miraha waxay leeyihiin qaab qaabaysan, mararka qaarkood waxay weli waxoogaa yar yar yihiin dhamaadka. Dhadhanka midhaha waa mid udgoon iyo sonkor, miisaanka ugu sarreeya ee midkiiba wuxuu gaari karaa 400 g
Midabka aan caadiga ahayn ee midhaha "Black Prince" waxay sababtay isku dhafka carotenoot iyo lycopene oo leh anthocyanins.
Wakhtiga khudradda "Black Prince" waa mid aad u dheer. Tani noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa laga yaabaa in pereopolylyatsya leh noocyada kale ee dalagyada solanaceous, Sidaa darteed, bannaanka u khibrad ayaa lagu talinayaa in ay ku beeri "The Prince Black" fogaan ah hal mitir iyo mitir badh iyaga ka.
Prince The Black yurubyo kala duwan ayaa la doorbidaa cusbo cusub, maaha kuwo ku habboon kaydinta muddada dheer iyo gaadiidka. Marka midabka wax lagu kariyo uu noqdo "yaanyo" yaqaan ".
Marka xulashada abuurka, waxaa wanaagsan in la doorto noocyada wax soosaarayaasha gudaha, waxay noqon doonaan kuwa ugu haboon cimilada deegaanka. Abuurka dibedda laga keeno waxay badanaa u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh, laakiin marka ay koraan, dhibaatooyinka aan la fileynin ayaa laga yaabaa inay soo baxaan, taas oo keeni karta khasaaro dalagga.
Sidoo kale mid ka mid ah daqiiqadaha ugu muhiimsan - nolosha shelfhaddii ay hore u dhacdey, biqilka abuurku si weyn ayuu u dhacayaa iyo dhalidda kuwa germinate noqon doono mid aad uga hooseeya inta la filayo.
Sida loo aasayo "Prince of Black"
Tamaandhada "Black Prince" ee qaybta inteeda badani way ka duwan yihiin noocyo kale oo aan si fiican u barafaysan oo yaanyo ah, sidaas awgeed beerashadooda ma noqon doonto dhibaato. Isla markiiba ka hor beerto waa lagama maarmaan si loo diyaariyo abuurka iyo ciidda.
On sale waxaad ka heli kartaa 2 nooc oo abuur ah: qaar ka mid ah waxay ahaayeen kuwa aan la shubin marxaladda wax soo saarka, iyo nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ayaa lagu daboolay, halka qaar kalena ay ahaayeen caadi. Marka ugu horeysa waxaa jira caleenta midab leh, wax waliba waa ay fudud yihiin iyaga: waxaa lagu beeray isla markiiba weelka geedo, aan loo baahneyn diyaarinta dheeriga ah.
Haddii miraha caadi ah, ka dibna xeerarka caadiga ah ee diyaarinta abuurka yaanyo:
Waxaa lagama maarmaan ah in la jarjaro faashadaha 20-84 cm dhererka, laab qaybta.
Seeds lagu seexiyo dhexda dhexe ee gabal this, duudduuban duudduuban iyo xerin dhambe.
Ku dheji qashinka dhamaystiran ee weelka oo ku shub xal milatari oo casaan ah oo ah 15 daqiiqo. Ka dibna waa in la miiro, faashadaha si toos ah ugu rid tuubada, adoo isticmaalaya biyo socda.
Ku qoy yaanyo yaanyo ah faashad leh kiciyaha kobaca ee 10.85 saacadood. Xajmiga ayaa dooranaya sida ku qoran tilmaamaha.
Taas ka dib, xalka ayaa la miiray, miraha waxay u baahan yihiin in laga buuxiyo biyo si ay u daboolaan faashadaha kala badh. Ka tag meel diiran 2 maalmood, halka dharka waa in ay sii qoyaan waqtiga oo dhan.
Ka dib, iyada oo ujeedada adag tahay, miraha waxaa loo diraa habeenkii qaboojiyaha, halkaasoo heerkulku uu noqon doono heerkii +3 - +5 ° C.
Waa muhiim! Haddii aad rabto in aad hesho seedling hore oo bilaabay miraha goosashada February, caleemaha waa in la iftiimiyo laambad 14-16 saacadood.
Nooca kiimiga ah ee astaamuhu waa calaamad muhiim u ah diyaarinta ciidda yaanyada sii kordhaya. Wixii "Black Prince" waa qiimaha ugu wanaagsan 6.0 - 6.7. Dhammaan yaanyada waxay doorbidi karaan ciidda bacrin ah oo iftiin leh, haddii aad acidic aad u badan, markaa waa inay ahaato lime kasta 3-4 sano kasta.
Waa muhiim! Haddii sannadkii hore, meesha aad ku tegi lahayd yaanyada, physalis, yaanyo, eggplant ama basbaas koray, ka dibna aadan ku beeran karin meeshan.
Waa hagaag, haddii uu horay u koraya yaanyada aagga qaaska ah ku koray zucchini, kaabajka, basasha, qajaarka, karootada, bocorka, baradhada.
Si aad ciidda ku saleysan ciidda beerta aad u baahan tahay inaad ku darto humus ama peat, iyo sidoo kale qaar ka mid ah superphosphate iyo ash alwaax. Si loo hubiyo in laga takhaluso cayayaanka iyo bakteeriyada halista ah, dhulka ayaa la gubi karaa ama la qaboojin karaa ka hor inta aan la isku qasin.
Si loo yareeyo yaanyada Prince Black si ay u sameeyaan dhibaatooyin la'aan, waxaan ku tilmaami doonaa kuwa ugu caansan ee iyaga loogu talagalay:
7 xabbo oo digir;
1 balka dhuudhka;
1 qaybood oo dhul ah.
3 xabbo oo digir;
1 qayb ka mid ah humus;
0.5 qaybood oo ah balka;
0.5 qaybood oo ah mullein.
Intaa waxaa dheer, 1 malyan oo isku dhaf ah waa lagama maarmaan:
amooniyam - 1.5 kg;
copper sulphate - 2 g;
Kansar geedka - 1 g.
Laakiin dhammaan kuwan Bacriminta macdanta ah waxaa loo isticmaali karaa waqti dambe sida quudinta.
Sida loo abuuro miraha "Prince Black"
Sida dadka kale, Amiirka Black Black kala duwan ee yaanyada waa la koray iyadoo la isticmaalayo geedo. Beeridda abuurista waxay ku xiran tahay xilliga geedo beerto, markaa qorshee waqtiga oo dhan. Waxay qaadan kartaa 45 ilaa 80 maalmood ka hor geedo diyaar u yihiin beerto.
Caadi ahaan, geedo diyaar ah waa 35 cm oo baadiyaha ah, waana muhiim inaanan korin geedo aad u ballaadhan, haddii kale si fiican uma qaadan doonto xididada oo si joogto ah u dhaawacan. Abuurka loo diyaariyey waxaa lagu aasay ciidda qoto dheer oo ku saabsan 1-2 cm.
Ma taqaanaa? Si loo kordhiyo biqilka yaanyo, miraha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan heerkul fiican, taas oo ah +15 C
Ka hor inta aanad qaadan, geedo ka mid ah "Black Prince" ayaa ugu fiican lagu hayaa heerkul ah 20-25 ° S maalmo qorrax leh iyo 18-20 ° S - maalmo daruuro leh.
Ka dib markaad soo qaadato, heerkulka ugu fiican wuxuu noqon doonaa 25-27 ° C inta lagu jiro maalinta, iyo 14-17 ° C habeenkii. Xilliga cimilada daruuriga ah, heerkulku wuxuu hoos u dhigi karaa heer 20-22 ° C. Toddobaad ka dib, waxaad u baahan tahay inaad heerkulka u dhigto 20-25 ° C inta lagu jiro maalinta (18-20 ° C cimilada daruurta leh) iyo 8-10 ° C habeenkii, saldhig joogto ah.
Ma taqaanaa? Gaadiid (ama quustay) macnaheedu waa daqiiqad marka geedo laga soo dhajiyo taangiyada guud ee shakhsi ahaaneed si kor loogu sii qaado.
Si loo fududeeyo geedo ka baxsan jaakad shinni ah, waxaad qabsan kartaa taxane ah waraabin leh biyo diirran. Caleemaha waxay bilaabaan inay quusiyaan marka ay leeyihiin 1-2 caleemo run ah. Tani waxay dhacdaa marka da'da dhalidda ay tahay 18-20 maalmood.
Ka dib markii taas, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo si ay u adkeeyaan geedo, oo ku saabsan 12-14 maalmood ka hor soo degtey. Waraabinta waqtigaan waxaad u baahan tahay inaad yareyso oo aad si tartiib ah u xajisid geedo qorraxda qoraxda. Isla mar ahaantaana, geedo waxaa lagu quudin karaa Bacriminta potash. Waxay kicisaa kobcinta xididada waxayna bixisaa dhalmo weyn marka dambe.
Waqtiga saxda ah marka ay tahay wakhtigii lagu beeray geedo yaanyo ah oo dhulka hoostiisa ah way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, laakiin sida caadiga ah waxaa lagu sameeyaa bartamaha bisha Juun. Qoryaha ayaa lagu aasay dhowr santim oo mitir markii la beeray, qiyaastii caleemaha cotyledon, oo u jeeda dhinaca koonfureed.
Waa muhiim! Mid ka mid ah khaladaadka ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay markii uu korayo geedo - dalaggu waa mid qaro weyn leh waana la beeray waqti hore. Si aad u degto waxaa ugu wanaagsan inaad isticmaasho geedo ah 30-35 maalmood.
Beerashada beeraha ee yaanyada maaha mid adag, laakiin waa inaad si dhab ah u sameysaa dhamaan talaabooyinka si aad u gaarto natiijooyin wanaagsan oo aad u hesho goosashada caafimaad iyo mid caafimaad leh.
Tall, gaar ahaan-fruited, yaanyada u baahan tahay garaf iyada oo aan lagu guulaysan, haddii kale miraha miisaankoodu ka hooseeyo miisaankooda ayaa u jilcan dhulka, waqti ka dibna way burin karaan buraashka oo dhan.
Marka laga soo tago waxyeelada muuqata ee tallaabooyinkan, miraha dhulka ku jiifa ama u dhow, waxay aad ugu nugul yihiin weerarada cayayaanka. Miraha dhirta la xirxiray waxay horumarinayaan waxyaabo ka fiican, sababtoo ah waxay helayaan iftiin qorrax iyo si fiican u hawo.
Hababka ugu caansan ee yaanyada qoyan:
Ha u oggolaanin in uu dhulku qalajiyo nidaamka asaasiga ah ee tamaandhada, sidaas darteed waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah oo joogto ah. Waqtiga ugu fiican ee soo saaridda waxaa ku jira cimilo dar dar ama subax.
Yaanyada dheeriga ah, oo ay ku jiraan "Prince of Black", waxay leeyihiin caleemo waaweyn iyo miraha weyn, sidaas darteed waxay u baahan tahay biyo ka badan noocyada aynnu u isticmaalno.
Dharka ugu sareeya Dhirta yaanyo "Black Prince" sidoo kale aad ayey muhiim u tahay. Quudinta iyo caleenta fuudka waa in la beddelo 2 toddobaad kadib. Waxyaabaha bacriminta ugu habboon:
Intaa waxaa dheer, sida bacriminta, waxaad isticmaali kartaa humus iyo slurry.
Tamaandhada "Prince Black": goorta la goosanayo
Haddii si sax ah loo sameeyo, iyo inta lagu jiro koritaanka tamaandhada ma jirin wax yaabaha cimilada ah (abaaraha xooggan, roobabka, dabaylo xoog leh oo xoog leh), marka miraha ugu horreeya laga yaabo inuu soo baxo 3 bilood ka dib, qiyaastii bilowgii July. Taas ka dib, ururinta waxaa la sameeyaa 4-5 maalmood oo kasta sida miro miro.
Sida aad u arki karto, sii kordhaya Prince Black kala duwan ee yaanyo waa fududahay natiijada waa u qalantaa. Midhaha yaanyadani waxay hubinayaan inay qoyskaaga ku faraxsan yihiin. Haddii aad jeceshahay yaanyada madow, Prince Black waa noocyada ugu fiican ee adiga.